Space maroketi: chii iwo, maitiro uye nhoroondo | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 01/12/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 30/11/2021 17:57 | Kuongorora nyeredzi
Munhu agara aine chinangwa chekuziva kupfuura izvo zviri panyika yedu. Kuti ukwanise kuongorora zvese izvi mumunhu, pane izvo maroketi emuchadenga. Ichi chishandiso chinofamba nemumhepo nekumhanya kukuru uye chinoshandiswa zvakanyanya sechombo. Zvisinei, inoshandawo pakuongorora nzvimbo.
Naizvozvo, tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze zvese zvaunoda kuziva nezve space roketi uye nemabatiro aanoita.
1 Chii chinonzi space rocket
2 Mhando dzemaroketi emuchadenga
3 Vanoshanda sei
4 Maroketi emafuta emvura
Chii chinonzi space rocket
Aya maroketi anowanzo aine jet injini (inonzi rocket engine) inogadzira kufamba nekudzinga gasi kubva mukamuri rinopisa. Ivo vanogona zvakare kufambiswa nekupisa kweiyo propellant muchubhu yekuvhura.
Rockets zvakare imhando yemuchina, nekuda kweinjini yekupisa yemukati, inogona kuburitsa iyo kinetic simba rinodiwa kuwedzera chikamu chegasi rinopukunyuka kuburikidza nechubhu. Ndosaka vaine jet propulsion. Zvikepe zvemuchadenga zvinoshandisa rudzi urwu rwekufambisa zvinowanzonzi maroketi.
Nerubatsiro rwemaroketi, maprobe ekugadzira, masatellite uye kunyange vazivi vemuchadenga vanogona kutumirwa muchadenga. Mupfungwa iyi, hatigoni kukanganwa kuvapo kweanonzi maroketi emuchadenga. Iwo muchina wakashongedzerwa neinjini yekupisa yemukati iyo inogadzira kinetic simba rekuwedzera kwegasi rejet propulsion.
Mhando dzemaroketi emuchadenga
Kune akati wandei marudzi emaroketi emuchadenga, akanyanya kukosha ayo ndeaya:
Kana tikafunga nezvehuwandu hwematanho, tichawana single phase rocket, anonziwo monolithic matombo, uye multiphase matombo. Sezvinoreva zita, pane zvinhanho zvakati kuti zvinoitika mukutevedzana.
Kana tikafunga nezvemhando yehuni, tinowana maroketi e mafuta akasimba, uko iyo oxidant uye propellant inosanganiswa mumamiriro akasimba mukamuri rinopisa, uye maroketi emafuta emvura. Iyo yekupedzisira inoratidzirwa mukuti oxidant uye propellant zvakachengetwa kunze kwekamuri.
Munhoroondo yose, kwave kune maroketi akakosha nekuti akabudirira kutumira vanhu muchadenga. Isu tinotarisa kune zvinotevera:
Vostok-K 8K72K, iyi ndiyo yekutanga roketi yakagadzirwa nevanhu. Yakagadzirwa muRussia uye yaive nebasa rekuita Yuri Gagarin munhu wekutanga kusvika munzvimbo.
Atlas LV-3B. Ita John Glenn dombo rekutanga reAmerica kusvika paPasi orbit.
Saturn V, roketi rakatora Neil Armstrong, Michael Collins naBuzz Aldrin kumwedzi.
A pyrotechnic element ine poda chubhu inonziwo rocket. Pane tambo iri pasi pe cylinder: painopisa, inopisa uye inopedza gasi, zvichiita kuti roketi risimuke nekukurumidza zvikuru kusvikira raputika pakati pemhepo uye rinoita ruzha rukuru.
Kunyangwe iyo musimboti wekushanda kwemaroketi emuchadenga yakaoma, musimboti Zvakafanana neyekutanga pfuti pfuti dzatinoziva kubvira 1232. Yakaonekwa mune mamwe marekodhi ekudzivirira kweguta guru redunhu reHenan muzana ramakore reXNUMX. Makomboti akazounzwa kuEurope nemaArabu muzana remakore rechiXNUMX nerechiXNUMX, asi aishandiswa sepfuti mukondinendi yose kusvikira atsakatika muzana remakore rechiXNUMX.
Maroketi emuchadenga anotevera mutemo wechitatu waNewton, musimboti wechiito nekuita. Chaizvoizvo, vanoshandisa injini yekupisa yemukati kugadzira iyo kinetic simba rinodiwa pakuwedzera kwegasi.
Izvo zvinokonzerwa nekupisa kwemakemikari ine simba guru uye inosundira mhepo pasi nesimba guru, sezvinotaurwa nemutemo wechitatu waNewton: simba rimwe nerimwe rinoenderana nerimwe simba reukuru hwakaenzana kune rimwe divi. Nemamwe manzwi, mhepo inosaidzira roketi nesimba rakafanana nerekudzika pasi rinoitwa negasi. Kana gasi richinge radzingwa, simba rinogadzirwa nekuita uku rinokonzera kuita kwete kungosimudza roketi, asiwo kuti ribvumire kusvika pakumhanya kwakanyanya.
Maroketi emafuta emvura
Kuvandudzwa kwemaroketi anokonzerwa nemvura kwakatanga muma1920s. Roketi yekutanga yemvura-yakafuridzirwa yakagadzirwa naGoddard uye yakatangwa muna 1926 pedyo neAuburn, Massachusetts. Makore mashanu gare gare, roketi rekutanga reGerman rakawedzerwa mvura rakavakwawo pane yakavanzika chirongwa. Mukupera kwa1932, Soviet Union yakakanda zvombo zvayo kekutanga.
Roketi yekutanga yakabudirira yakakura-yemvura-yakafukidzwa yaive yeGerman yekuyedza V-2, iyo yakagadzirwa munguva yeHondo Yenyika II ichitungamirwa nenyanzvi yeroketi Wernher von Braun. V-2 yakatanga kutangwa kubva kuPeenemünde research base pachitsuwa che Usedom musi wa 3 Gumiguru 1942. muromo ndiyo chikamu chinotakura mhosva, chinogona kunge chiri musoro wehondo kana chiridzwa chesainzi.
Chikamu chiri pedyo nemusoro chinowanzova nemidziyo yekutungamirira, yakadai semagyroscopes kana gyro compasses, acceleration sensors, kana makombiyuta. Pazasi pane matangi makuru maviri: imwe ine mafuta uye imwe ine oxidant. Kana saizi yeroketi isiri yakakura kwazvo, zvese zviri zviviri zvinogona kunanga kune injini nekudzvanya tangi yayo yemafuta neinert inert shoma.
Kumaroketi makuru, nzira iyi haishande nekuti tangi rinenge richirema zvisingaite. Naizvozvo, mumaroketi makuru anofambiswa nemvura, kudzvinyirirwa kunowanikwa nenzira yepombi iri pakati pemafuta tangi uye rocket motor. Sezvo huwandu hwemafuta huchaputirwa hwakakura kwazvo (kunyangwe kana V-2 ichipisa 127 kg yemafuta pasekondi), pombi inodiwa inzvimbo yakakwirira yecentrifuge inofambiswa negasi turbine.
Mudziyo une turbine nemafuta ayo, pombi, mota, uye zvese zvine chekuita nazvo zvinoumba injini yeroketi remafuta emvura. Nekuuya kwekubhururuka kwemuchadenga, mubhadharo wachinja uye akati wandei matombo akabuda, akadai seMercury, Gemini neApollo. Chekupedzisira, kuburikidza nemuchadenga, roketi rinofambiswa nemvura uye kutakura kwaro zvinosanganiswa kuita chinhu chimwe chete.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve space roketi uye maitiro avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Space maroketi